คอนโดบ้านบุญพิทักษ์ ซ.สุขุมวิท 81 | DDHomeLand
คอนโดบ้านบุญพิทักษ์ ซ.สุขุมวิท 81
โดย wit ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17 พ.ค. 2553.
ขาย หรือ เช่า.... ห้องชุด ที่คอนโดบ้านบุญพิทักษ์ ซ.สุขุมวิท 81 ขนาด 36 ตรม.(4x9m) พร้อมสิทธิจอดรถในร่ม 1 คัน ,ชั้น4ทำเลดีปากซอยเป็น BTS และโลตัสสุขุมวิท 50 ใกล้ทางด่วน ใกล้ห้างคาร์ฟูอ่อนนุช เดินทางเข้า-ออกสะดวก บรรยากาศดี ห้องตกแต่งสวยคล้ายโรงแรมพร้อมแอร์และน้ำอุ่น เสาอากาศทีวี เป็นห้องริมมีหน้าต่างสองด้าน มีระเบียง Pantryซิงค์ล้างจาน
(ในกรณีเช่า ผู้เช่าต้องชำระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางเดือนละ 705 บาท ค่าน้ำยูนิตละ 17 บาท ค่าไฟยูนิตละ4บาท มัดจำค่าเช่าล่วงหน้า3เดือน ชำระค่าเช่าก่อนเข้าอยู่ คอนโดนี้มี ลิฟท์2ตัว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีที่จอดรถยนต์ให้1 คัน มีวินมอเตอร์ไซต์อยู่หน้าคอนโดตลอดทั้งวัน เบื่อรถติดจอดรถทิ้งไว้ไป BTS ได้สบาย)
ขายราคา 700,000 บาท หรือ เช่าเดือนละ 4,500 บาท
ติดต่อ คุณวิทย์ เบอร์โทรศัพท์ 01-686-3464
ติดต่อ: wit อีเมล์:
ต้องการ: ขาย / ให้เช่า ราคา: 700,000
โทรศัพย์: 022403644,081-7524466 จังหวัด: กรุงเทพ
คำค้น: บ้านบุญพิทักษ์คอนโด | ให้เช่าคอนโดบ้านบุญพิทักษ์ | ให้เช่าบ้านบุญพิทักษ์สุขุมวิท81 | အိုးကောင်းများ | မြန်မာအပြာစာအုပ် pdf | စိတ်အမောပြေ photo | မြန်မာအပြာစာအုပ် | အဖုတ် photo | လီး အဖုတ် photo | ဒေါက်တာ ဇော်ကြီး အပြာစာအုပ် |
ကာမဆန်ဒ พฤกษาวิลล์ 73 พัฒนาการ ม.แสงอรุณ รามอินทรา 68 မြန်﻿မာ﻿အောစာ﻿ပေ ကျားအားတိုးဆေး ရှယ် ဖင်ကြီး မြန်​မာ​ဂေးဇာတ်​ကား လိုးကြမယ်​​ဟေ့​ကောင်း​ကောင်း မြန်​မာ​ဂေးဇာတ်​ကား မြန်​မာ​ဂေးဇာတ်​ကား ဒေါက်တာ မမ မြန်​မာ​ဂေးဇာတ်​ကား backroom casting উপননাস ဟိုမို​အောစာအုပ်​များ မြန်​မာစာတန်းထိုး​အော်​ကား တရုတ်​ဖူးကား ဖင်​ကြီးမ အပြာဓါတ်ပုံ ဖင်​ကြီးမ ဒေါက်တာတုတ်ကြီး Myanmar Model Buttocks မြန်မာအိုး's Facebook Wall မိထွေး বাংলা চিট নতুন কের মােক েচাদা ဆရာ အင့် TZ သတင်စုံ ဖင် ပြောင် বাংলা গ্রপ চটি ২০১৪ ဖင်​ကြီးမ ဟိုမို​အောစာအုပ်​များ မြန်​မာစာတန်းထိုး​အော်​ကား တရုတ်​ဖူးကား ဖင်​ကြီးမ အပြာဓါတ်ပုံ ဒေါက်တာတုတ်ကြီး Myanmar Model Buttocks မြန်မာအိုး's Facebook Wall မိထွေး বাংলা চিট নতুন কের মােক েচাদা ဆရာ အင့် TZ သတင်စုံ
process: 0.0217 sec. :: memory: 1.34 MB